Umatshini we-EVA wekhaya we-EVA-i-China i-EVA yeKhaya leKhaya abavelisi, abaXhasi
Umgangatho womphunga womatshini othungayo ophahleni lokulala abantwana igumbi lesiponji elirhubuluzayo ukhuhla iphedi yegumbi lokuhlala
Ikhaphethi yokuthungwa ethambileyo kunye nokutyibilikayo Yenza izibuko lezibuko elithuleyo nelicocekileyo Igama lemveliso: ukusika ikhaphethi Umbala wemveliso ukhetho oluninzi Ilaphu leMveliso: Shu ukhathalelo lwevelvet yomkhiqizo: Ukuxubha okwenziwe eChina Ukucaciswa kweMveliso: ezinje ngeenketho Ububanzi besicelo: igumbi lokulala / igumbi lokungena / ifestile ye-bay, njl.Ukuhambelana kombala, ukuhambelana kombala, Umdlalo omileyo Ngwevu emnyama + beige Bomvu obomvu + beige Pr ...
Umgangatho we-foam eva floor mat Umtya oqinileyo womgangatho we-foam
Umatshini othungayo womgangatho, iimethi ezirhubuluzayo, iibhedi zomgangatho wegwebu, igumbi lokuhlala kunye negumbi lokulala elipheleleyo
Izinto ezifanelekileyo zokukhusela indalo
Ngokukhethekileyo izinto ze-EVA, ezinobhetyebhetye obuhle, ukutyeba okufana nerabha,
Igloss yomhlaba elungileyo kunye nokuchasana nokuguga, lukhetho olufanelekileyo kubomi basekhaya
Evelvet velvet mat baby puzzle ikhaphethi amagwebu suede amakhuko abantwana badlala ingubo lokulala mosaic floor iimethi
Ukuthunga iphazili ikhaphethi kumgangatho omata abantwana abarhubuluzayo bomdlalo wemidlalo amagwebu EVA emethini imigangatho igumbi lokulala igumbi lokuhlala eligcwele iisuti zemethi
Ukuqina kweempuphu zokugoba amagwebu abafundi kwigumbi lokulala kwigumbi lokulala i-tatami foam mat
Ilindle elingcolileyo alihambi
Kukulungele ngakumbi ukucoca, sula nje ukungcola ngetawuli emanzi.
EVA Foam Sports Mat Black Gym Mat Foam Kumgangatho Mat Matami Puzzle Mat EVA ekungeneni Jigsaw Puzzle Mat nge
Sinoluhlu olubanzi lwe-Taekwondo mat, iphazili mat, eyenziwe ngomgangatho ogqwesileyo wemveliso eluhlaza ukuqinisekisa ukhuseleko oluphezulu lwabadlali. Inika intuthuzelo epheleleyo kubadlali okanye kubasebenzisi. Ezi mathi zivavanywa ngokungqongqo kumgangatho ukuqinisekisa ukuba ziyahambelana nemigangatho yamanye amazwe. Iimveliso zethu ziyafumaneka kwiimarike ngamaxabiso aphantsi.
Splicing igumbi lekhaphethi kwigumbi elipheleleyo ivenkile ibhloko iphazili iphambili
1.Umvelo kokusingqongileyo kunye non-ityhefu
Ukuxinana okuphezulu kwezinto zokhuselo lokusingqongileyo izinto ze-PE, ezingenatyhefu, ezingenabumba, ivumba elingacaphukisi
2. manzi, kulula ukuyicoca
Itekhnoloji yokumelana nokufuma kunye nezinto ezikumgangatho ophezulu zenza ukuba mat ihlanjwe ngokulula ngesepha namanzi.
IiMat ziyanxitywa nge-non-slip slip
4. Umgangatho ophezulu
Ngokusebenzisa umgangatho we-EVA omgangatho ophezulu, akukho lula ukukhubazeka
5. Ixabiso leFektri
Singumvelisi we-EVA mat, ixabiso libiza kakhulu
Ukudlala okuDibeneyo kwezeMfundo EVA Igumbi lePuzzle kuMgangatho waBantwana
2) Ukufakwa emanzini, ukufakwa kothuli kunye nokusebenza okuchasene neskid;
(3) Kulula ukuyicoca, ukuziqhelanisa nokuhlamba impahla kunye nokuhlamba izandla, ayizukukhubazeka, ayizukukhulula iinwele, ayizukuphela, kwaye umphezulu weglu awuyi kuvezwa lilanga ngqo;
(4) Imveliso ayinalo ivumba elikhethekileyo, iphumelele ukuhlolwa kukhuseleko lokusingqongileyo kuzwelonke, kwaye iyimveliso engenakho ukuhlolwa;
(5) Akukho kubuna, ukumelana ne-abrasion ngaphezulu kwebanga lesi-4, ukuhlamba ukukhawuleza ngaphezulu kwebanga lesi-3.
1. Xa imozulu intle, yithathe uyise elangeni ukuze uyibulale, kwaye uyibeke ngaphakathi ixesha elide. Ukuba idibana nomoya ofumileyo, kulula ukubumba.
2. Yomise kwangoko emva kokuyihlamba ukuze ihlale yomile.
3. Ukuba ngempazamo ichaphazelwe nge-mimeograph, ipeyinti okanye isuphu, kufuneka icocwe kwangoko ukuqinisekisa ukuba icocekile kwaye ikhusela ivumba elikhethekileyo.
Imethi yabantwana yephazili, imethi yomgangatho wegwebu, ukuqiniswa komgangatho wokulala kumagumbi okulala, iimethi ezirhubuluzayo kunye nemethi yomgangatho
iveliso ezifakiwe, Imephu yendawo, AMP Iselfowuni Umgangatho weMat Puzzle, Umgangatho wePuzzle wokuzilolonga iMat, Umgangatho wePuzzle Mat Cushion, Umgangatho wePuzzle wePuzzle, Umgangatho wePuzzle yePuzzle, Umgangatho wePuzzle, Zonke iiMveliso